Creative Writing » အလွမ်း သင်္ကြန် (၂)	45
ဒီ နှစ်တော့ မမြင်အပ် မမြင်ဝံ့တဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးတွေ လည်း မရေးတော့ပါဘူးး။ စိတ်လည်း ညစ်ညူးမခံတော့ဘူးး
ပူတာတော့ အတော် ပူပါတယ်။ ရာသီဥတု ကို ပြောတာ။ ဒါပေမဲ့ ပြန်တဲ့ လမ်းတစ်လျှောက် ထနောင်း ရိုးကျဲကျဲတွေနဲ့ လေပူတွေ တိုက်တဲ့ ကြားက ရလာတဲ့ အညာနွေ အနံ့ကို အရမ်းနှစ်သက်ခဲ့ဖူးတယ်။
အိမ်တွေက စိမ်းစိမ်းကားကား ဖာသိဖာသာတွေ။ ပြန်ဆက်ရမယ် ဆိုရင် ရပ်ကွက် အလိုက်ကို အကြိုနေ့ကနေ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်ထိ ဘယ်အိမ်က ဘာမုန့်၊ဘာချက်မယ် ဆိုတာတွေ တိုင်ပင်ထားလေ့ရှိကြတယ်။
နောက်ရက်ဆို ပိတောက်လဲ ပွင့်ပြီ။ ရတဲ့ ပိတောက်ကို ဘုရားပန်းတစ်အိုးထိုးပြီး ပိုတာကို ဟိုလူ့ပေး ဒီလူမျှနဲ့ ဘယ်အိမ်က ပိတောက်က အသေး၊ ဘယ်က အကြီး စတာလည်း ရွေးပန်ရသေးတာ။
သနပ်ခါးကျောက်ပြင် ဆေးပြီး သနပ်ခါး/နံ့သာဖြူ/ကရမက်/တောင်နံကြီး စတာတွေကို ငွေဖလား အသေးလေးနဲ့ ရအောင် သွေးရတယ်။
စလုံးထိ နံ့သာတုံး မျိုးစုံပါလာတယ်။ ကျနော်လားး??? ဇော်သန့်ရှိတဲ့ သင်္ကြန်ဆို လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
မရှိရင်တော့ ကွကိုယ် တရော်ကင်ပွန်း လေးပြုတ်ပြီးပဲ လုပ်လိုက်တယ်။ နယ်မှာတုန်းက သစ်သားရေနံဝ အိမ်လေ။
တရားပွဲက ပြန်လာရင် အိမ်ရှေ့မှာ ပရိတ်ပန်းလေး ချိတ်ပြီး ထားး၊ အပ်ချည်နဲ့ အိမ်ကို စည်းတားသလို လိုက်တားး
Wow says: ဘာာာာမှ မြင်ရ၀ူးပေါ့ ပျင်းစယာဂျီးအေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: မြို့ပေါ်မှာ တစ်နှစ်ရှုပ်လိုက်။
ဗုံဗုံ says: အို ဂျီးဝါးရဲ့ အတက်ရှိသေးဒယ်ပေါ့နော်..
ထားခဲ့တဲ့ခလေးတွေများ လာကြည့်လှည့်ပါအူးတော့…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ငင်င်င်… နာ ခလေးဘယ်နှစ်ယောက်ထားခဲ့မိလဲဟင်င်င်င် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: နာ့ဖင့် …
Kaung Kin Pyar says: အလွမ်း သင်္ကြန်(၂)ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ဖတ်မိလို့…(၁)ကို ငါကျော်များသွားမိလားလို့ စဉ်းစားဖြစ်သေး…။ သို့သော် မဖြစ်နိုင်…၊ ခု နောက်ပိုင်း ရွာထဲဖလန်းဖြစ်နေတော့ … ပိုစ့်လွတ်သွားတာတော့ မဟုတ်လောက်လို့…။ စာဖတ်လိုက်မှ…မနှစ်ကရေးခဲ့တာကို သွားတွေ့တယ်…။
Alinsett@Maung Thura says: ကျနော်လည်း ဟိုနေ့က အဲ့လိုလေးရေးမလားတောင် တွေးနေသေး ။
အရင်ကဆိုရင် သင်္ကြန်ရောက်ခါနီး နှစ်လလောက်အလိုကတည်းက ရင်တခုန်ခုန်နဲ့ ရောက်မယ့်နေ့ကို လက်ချိုးရေနေမိတာ… ရေလောင်းရေပတ်ဆိုတာရယ်..လူကြီးမိဘတွေကို ဝိုင်းဝန်းပြုစု ကုသိုလ်ယူကြတာရယ်တွေဟာ
.ပျော်စရာအတိ.. ရင်ခုန်စရာအတိ… အခုနောက်ပိုင်း… ကျနော် ရန်ကုန်ကို ပြန်ရောက်လာတဲ့ နှစ် ၂၀၀၇ လောက်ကတည်းက ရန်ကုန်သင်္ကြန်ဟာ စိတ်ပျက်စရာအတိ…
ဘယ်လို ကြည့်ကြည့် ကိုယ့်အမြင်နဲ့ ဓါတ်မတည့်တော့တာ… အဲဒါနဲ့ပဲ… ၂၀၀၇ နောက်ပိုင်း သင်္ကြန်ဆို အိမ်တွင်းပုန်း… ၂၀၁၂ နောက်ပိုင်းမတော့ သင်္ကြန်ဆို…နယ်တွေဘက် ခရီး ထွက်…ပြေး…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဆက်ဆက်ရေ
lu lu says: ငယ်တုန်းကလည်း ခရစ္စယာန် မို့သင်္ကြန် မပျော် ရ
kai says: ပြန်ရမှာမဟုတ်တာတွေထဲ.. ဘယ်တော့မှနောင်တမရစေနဲ့ပေါ့..
၉၆၉ တွေတောင် အမျိုးဘာသာသာသနာအော်ပြီး.. ဟိန္ဒူသင်္ကြန်ကျရင်ပျော်ကြမှာ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: ဒါဆို သင်္ကြန် က ထေရဝါဒ နဲ့ မဆိုင်ဘူးပေါ့
naywoon ni says: ​အော်​ ​ဟော့ ဗြဟ္မဏ ဝါဒီ​တွေ ဒီ​နေရာ လာစု​နေတာကိုး ​နေ၀န်းနီလည်း ပဋိက မကုန်​ခင်​က သင်္ကြန်​ဆိုတာ ဘာလားညာလားနဲ့ ​ယောင်​ခဲ့ဖူး ။ ခု​တော့ ကိုယ်​ဝါဒနဲ့ မဆိုင်​ဘူးလို့ပဲ သတ်​မှတ်​ထားမိ ။
ခင်ဇော် says: သများရဲ့ ဟိုဘက် ဒီဘက် အဘိုး ရဲ့ အဘိုးအဘွားဒွေက
uncle gyi says: သင်္ကြန်ဆိုမန်းသင်္ကြန်သတိအရဆုံး
ခင်ဇော် says: အဟုတ်။
Nyo Win says: ကျန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်သာသာအထိတော့ သင်္ကြန်မရောက်ခင်တဏလလောကတည်းကကြိုလွမ်းကြိုပျော်
ခင်ဇော် says: အဟုတ်ပါ့။
Mike says: .ဒီနှစ် သင်္ကြန် လည်းအရင်နှစ်လိုပဲ
.ကလေးတွေတော့သူ့အစီစဉ်နဲ့သူရှိပီးသား …နာအိုလေဗျီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ခေးတွေကတော့ ပျော်ကြအူးမှာပဲ။
Mr. MarGa says: ဘာပြောရမယ်​မှန်းကိုမသိတာ
ခင်ဇော် says: မှီအူးမှာပါ။
အောင် မိုးသူ says: သင်္ကြန်ကတော့ သိတတ်စကတည်းက ခြောက်နှစ်ဆက်တိုက် ဘုန်းကြီးဝတ်ခဲ့တော့ သေသေချာချာ မသိခဲ့ပါဘူ။ ငယ်သူမို့မသိပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
pooch says: သင်္ကြန်အလွမ်းလား ရှိပါ့
တမြန်မနှစ်ကတော့ ကျစွာဆရာတော်ပျံလွန်တော်မူရှာတယ် နောက်ပိုင်း အခါတွင်းဆို ခရီးတွေ ထွက်ကျင့်ရှိလာတာ ကြာပေါ့
ရေရှားပါတယ်ဆို ရေသန့်ဘူးထဲက ရေနဲ့ရေလာခိုးလောင်းလို့ ဇာတ်လမ်းတခု စခဲ့ဖူးတယ် ဘာလိုလိုနဲ့ ဇာတ်သိမ်းခဲ့တာတောင် သိပ်မကြာလတ်လတ်ဆတ်ဆတ် လောလောလတ်လတ်
ရင်ခုန်စွာနဲ့ မျှော်လင့်နေခဲ့တယ် အိပ်မက်နောက်တခု အကောင်ထည်ပေါ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်
ဗုံဗုံ says: ကိုကိုခင်​​ဇော်​​ရေး​တော့သများရွာ သဂျန်​အ​ကြောင်း​ရေးချင်​
ကိုကိုခင်​​ဇော်​က ​ချောလိုက်​တာ နုဖပ်​အုအပ်​​နေတာဘဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
Wow says: အူးလေးရမ ပေးမယ်ပြော အူးလေးနဲ့ ချည်ထား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: ကိုကိုခင်ဇော်က လိုင်းပြောင်းသွားဘီ
မယုံရင်ဖွဘုတ်မှာလာကျိ.. Was this answer helpful?LikeDislike 12381
Wow says: ကျန်းးးး နာ့ဂို ပျံလာချင်အောင် ဖျာယောင်းနေဒါ Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: ငယ်ငယ်တုန်းက ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတဲ့ သင်္ကြန်တွေကို ပြန်တွေးကြည့်မိတယ်…။
Crystalline says: သကြန်​တွင်း စုထားသမျှမုန့်​လုပ်​နည်း​တွေစမ်းမလားလို့… ဟိုးအရင်​က မန်း​လေးတို့ဘာတို့ရထားနဲ့သွားရင်​ ဘူတာ​ဘေး ​ရေအိုး​လေး​တွေနဲ့​ရေ​ရောင်းသူ​တွေ… ​ဈေး​ရောင်းသူ​တွေဆို.. သကြန်​မတိုင်​ခင်​တလ​လောက်​ကတည်းက. ရထားရပ်​ရင်​​ဈေး​ရောင်း…ရထားဘူတာကစထွက်​တာနဲ့ ပါလာတဲ့​ရေနဲ့ ရထား​ပေါ်​လောင်းတာ… အရမ်းစိတ်​ဆိုးပဲ… တံခါးပိတ်​ထားရင်​ ပိုဆိုး… တံခါးကမလုံ​တော့ တံခါးကဖုန်​​တွေပါကိုယ့်​​ပေါ်​ရောက်​တာ… အခု​တော့ ရထားလည်းမစီးဖြစ်​တာ..ဆယ်​စုနှစ်​တစ်​စုမက​တော့…
လုံမလေးမွန်မွန် says: သူတို့သင်္ကြန်များ လွမ်းစရာ… ခုချိန် သင်္ကြန်ဘာလုပ်ဖူးလဲ စဉ်းစားရင် ဘာအမှတ်တရမှ ထွက်မလာတော့ဘူး… သင်္ကြန်ဆို နေပူပူ ရေစိုစိုနဲ့ ရေထွက်ပက်ရင်း နဂိုက မဖြူတဲ့အသားတွေ ပြာသွားတာပဲ မှတ်မိတော့တယ်.. နှစ်ဆန်းတစ်ရက်ဆို အမေက ဘုရားဆင်းတုတွေအကုန် ရေသပ္ပာတယ်တယ်… (ဘုရားစင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်ပဲ ထားပါတော့..) ကိုယ်က အဲဒါတွေလုပ်ရတာ ပျင်းတယ်ဆိုတော့ အမေ့ကိုကြည့်ပြီး ပင်ပန်းနေတာ.. (ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းချက်)… အဆောင်နေတုန်းကဆို အစ်မတွေက သင်္ကြန်နားနီးရင် စောင်တွေ ခြင်ထောင်တွေ သေချာပြန်လျှော်တယ်.. ငင့်.. ရုံးပိတ်ကာနီး အလုပ်တွေရှုပ်နေတော့ မလုပ်နိုင်ပါဘူးရယ်.. ပြန်ရင်လည်း လေးလို့ သယ်မသွားဘူး.. အားမှပဲ လျှော်လိုက်တာပဲ… အနှစ်ချုပ်ရင်တော့ နှစ်ဟောင်းတွေ နှစ်သစ်တွေ ဘာမှခေါင်းထဲမရှိဘူးရယ်.. (သများက မလစ်တလစ်.. မတစ်တတစ်… ဟီး)… အဆင်ပြေတဲ့အချိန် အဆင်ပြေသလို လုပ်လိုက်တာပဲ.. တရားစခန်းဝင်တာတို့ သီလရှင်ဝတ်တယ်တို့ ဆိုတာကလည်း ပိတ်ရက်ရှည် ဒါလေးပဲ ရှိလို့ လုပ်လိုက်တဲ့ သဘောပဲ… ဒီနှစ်တော့ စားလိုက်အိပ်လိုက် အခွေကြည့်လိုက်နဲ့ အိမ်မှာ အပြည့်နားပစ်မယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ခိခိခုခု။
တောင်ပေါ်သား says: ဒီနှစ်သင်္ကြန်
ခင်ဇော် says: မြစ်ထဲ ရေကူးပြီး
မွသဲ ( 17082011 ) says: ရှမ်းပြည်သင်္ကြန်ဆိုမိုးရွာတဲ့ဒေသမှာကြီးခဲ့ရတော့ ချွိပြောတဲ့မြင်ကွင်းမျိုး တခါမှမမြင်ဖူးဘူးရယ်။ ငယ်ငယ်ကသင်္ကြန်ဆိုတာ အိမ်ကနဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုက်တက်ရတဲ့ပွဲလို့ပဲ မှတ်မိနေဒယ်။ အိုက်မြို့မှာက သင်္ကြန်တွင်းဆို တနေ့တနေ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း နှစ်ဆယ်ကနေသုံးဆယ်အတွင်းရောက်အောင် အပြိုင်သွားတတ်ကြတာကလား။ မန်းတပ်ဆိုတာကလဲ စတုဒီသာမန်းတပ်ပဲရှိတာ။ အိမ်ရှေ့ရေပုံးချပက်ပြန်တော့လဲ မိုးရွာတာရယ် လူမရှိတာရယ်ကြောင့် အလွန်ဆုံးနှစ်နာရီတောင်မပြည့်တတ်ဖူးရယ်။ ကြီးလို့ပြည်မဖက်ရောက်ပြန်တော့လဲ ဘာမှမရှိတဲ့မြို့မို့ အိမ်ထဲအိပ်လိုပ်စားလိုက်နဲ့မို့ ခုထိသင်္ကြန်ဆိုရင်သိပ်ရင်မခုန်ခဲ့ဖူးဘူး။
ခင်ဇော် says: ကျနော် နမ္မတူမှာ သင်္ကြန် ၂ နှစ်နေဖူးတယ် ယောက်ခမွ။
ကူမားရ် says: ဘာ သင်္ကြန်လည်း!!!!!
ခင်ဇော် says: ဘယ် တုန်းကတည်းကမကျေနပ်တာတွေ လာအော်သွားတာတုန်း??